Ny momba anay. – Zaza no iriako
Zaza no iriako
Ny momba anay.
Posted on November 23, 2016 November 23, 2016 by zazanoiriako
Anio faha 18 volana febroary taona 2015
Androany aho dia hampahafatatra anao bebekokoa ny momba anay.
Valisoa ny anarana ho entiko eto amin’ity blog ity, handray 33 taona aho antsihoantsy.Mpiompy ny asako, mimpetraka aty ivelany aho, efa ho 4 taona izay. Mipetraka amin’ny toerana lavitra tanan-dehibe izahay,azo isaina ny olona mba hita ao anaty iray andro.Manana alika roa aho, dia i Boy sy Baba,ireo mba solon’ny zaza ao ato an-trano (vazivazy ny ahy).
Izy no “baba”
Tamin’ny faha-25 taonako aho dia nitoe-jaza tamin’ny sakaizako taloha ,ndrisy kosa anefa fa tamin’ny faha-5 volana sy 15 andro ny kiboko dia afa-jaza aho ny Alatsinainy faha 19 volana novambra taona 2007,mafy tamiko io sendra io fa kosa tsy irery aho fa teo Andriamanitra nampionona foko.
Tamin’ny taona 2009 aho nifanena tamin’ny Jones, ary nanomboka niara nipetraka izahay ny taona 2011,ny taona 2013 izahay no nanao voady fa hiaraka ka hizara soa indrindra, ary hiaraka na mafy na ho sarotra ny dia.
Nahatsapa anefa izahay fa misy banga teo fiainanany dia ny tsy fisiany “zaza” tao an-trano. Nandritra ny fotoana niarahanay nefa dia toa tsy mba nisy volana na taona mba honohono fa nitoe-jaza aho. Manontany tena izahay satria izahay dia tsy nampiasa fomba fandrindrana fiainam-pianakavina,na pilina na tsindrona izany. Ny marina kokoa dia izaho dia mbola tsy nampiasa an’ireny mihitsiny tamin’ny fiainako fa manisa andro nahavanana ahy kokoa.Lasa ny eriteritray, toa lasa mifampiahiahy izahy,“izy ve sa izaho e?“
Etsy akilany,ny havana sy namana amin’izany toa manontany saika isaky izao mba miresaka izao “Fa amin’ny oviana ndry kia miteraka? Nga kia ndry tsy hiteraka? Fa misy olana nga kia?….manindrona foko mafy ireo fanontanina ireo, eny fa na dia mbola tsy voporofo aza fa misy olana eo aminay, hany ataoko matetika dia tsy mamaly fa mitady zavatra hafa hanovana ny resaka.
Noho ilay fanirina te-hanan-janaka anefa dia tsy ninjanona fotsiny izahay fa manantona ny Fertility clinic izay havanana amin’ io sehatra io satria io hany vahaolana voalohany hitanay fa afaka hamaha sy hamaly ireo fanontanina izay tsy ahitam-baliny ireo. Mety manontany tena ngambany enao ” 2 taona ve dia efa ampy hilazana fa misy olana eo aminareo?”
Hozaraiko ao amin’ny takila manaraka ny dingana rehetra hataonay, mino aho fa mahaliana izany.
Mizaotra anao hatrany aho namaky.
Tagged fitaizana, fiv, gasy, ivf, mitaiza, zaza
Tonga soa eto amin’ny Blogn”i Valisoa
Ny dingana voalohany …
10 andro nodiaviko taorina Embryon transfer
Ny azo atao sy ny tsia aorina ET
12 Jolay 2016 : Embryon transfer
Vaovao avy aty amiko e!
Egg Collection : Finjinjana ny atody